Oos Huuske, ikhaya lakho lesibini!
'Oos Huuske' yindlu epheleleyo enazo zonke izibonelelo. I-cottage isandula ukulungiswa ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe ngayo yonke induduzo. Izinto ezidala zigciniwe, ukuze indlu, eyaqala ngo-1750, ikhuphe umoya opholileyo kunye nopholileyo!
Kwi-'Oos Huuske' kukho indawo yabantu abane. Kukho amagumbi amabini okulala akhoyo. Kwakhona kunokwenzeka ukuba ubhukishe i-cottage ezimbini. Uya kuba negumbi lokulala eli-1 kuphela elikhoyo.
'I-Oos Huuske' ikwimbindi yeCatsop, idolophu yakudala ecaleni kwelali yase-Elsloo. Kufuphi neMeuse ehambayo, kodwa ngaphezu kwayo yonke into ejikelezwe ngamahlathi amahle anamathambeka amaninzi, imithombo yendalo kunye neentlobo zezityalo ezenzeka apha kuphela. Kulapho ilizwe leenduli liqala ngokoqobo kuzo zonke iinkalo, kodwa kwimo yalo ecocekileyo neyokuqala. Akukho khenketho oluninzi apha, kodwa uxolo, indawo kunye nobubele bokwenyani. Zininzi ngokwaneleyo iindawo zokutyela ezimnandi kwindawo ekufutshane. Kukho ifama ye-ayisikrimu kufutshane nomnyango. Kwaye ukuphosa ilitye ukusuka kwizixeko ezinjengeMaastricht, iHeerlen, iAachen, iHasselt kunye neLiège.
Sisoloko sifumaneka ngexesha lokuhlala kwakho.